I-AC - Indawo Yokuqesha Ngaselwandle NeMoto Eqeshisayo ePura Vida -20% - I-Airbnb
I-AC - Indawo Yokuqesha Ngaselwandle NeMoto Eqeshisayo ePura Vida -20%
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMelanie
Vuka ukuya ekuphumeni kwelanga emnyango wakho kule ndlu intsha kwindawo yetropiki yasePraia do Tofo.
Ngeshawari yangaphandle ebekwe phakathi kweegadi ezichumileyo, iPura Vida ibonelela ngezixhobo zeenkwenkwezi ezisisigidi kunye namava anjengalawo awekho.
Jonga i-surf kunye neminenga kwifestile yakho yangaphambili okanye ujonge ukutshona kwelanga phezu kweentende zezandla ngasemva, iingcango ezinkulu zeglasi kunye neefestile ezibanzi zikwenza uzive ngathi ufakwe kwindalo ngelixa unobunewunewu bamanzi ashushu kunye nomoya womoya kwigumbi elikhulu.
Indlu enamagumbi amabini okulala elunxwemeni anegumbi lokuhlambela elingaphandle likuvumela ukuba ujonge iinkwenkwezi kunye nenyanga ngelixa uneshawari entle eshushu.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinesitovu segesi esi-4 + izitovu zombane ezi-2 kunye neoveni, ifriji enkulu, umatshini wokuhlamba, i-fiber optic WIFI yasimahla efumaneka 24/7.
Ngaphandle kokuba ibekwe umgama wokuhamba ukusuka kwindawo ephithizelayo yemarike kunye nokuhamba umzuzu omnye ukuya eTofo Scuba, iPura Vida ihleli yodwa phakathi kweendunduma zesanti kwindawo ekhuselekileyo phakathi kolwandle kunye notshintshiselwano (eyona mbono ilungileyo yeTofo ukutshona kwelanga).
Umbuki zindwendwe ngu- Melanie
We are Dave & Mel, and our dogs Nena and Indie. We live in Mozambique for the past 15 years, we are ocean lovers and we couldnt be happier to share this place with everyone willing to explore Tofo Beach with sandy feet.
Ngexesha lokuhlala kwakho siya kuhlala kwindlu yegadi ngasemva komhlaba. Asiyi kuba sendleleni njengoko sibiyelwe ngokwahlukileyo kwiPura Vida, kodwa iyafumaneka ngamaxesha onke ukuba kuyimfuneko.
Nceda uqaphele ukuba sinikezela nge-AIRPORT SIMAHLA ekubhukishweni kwe +7nights.
Ngexesha lokuhlala kwakho siya kuhlala kwindlu yegadi ngasemva komhlaba. Asiyi kuba sendleleni njengoko sibiyelwe ngokwahlukileyo kwiPura Vida, kodwa iyafumaneka ngamaxesha onke uk…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Praia Tofo